Home » Kopioi kirjoittaminen
09.05.2020 Category: Kopioi kirjoittaminen
Mune ~ gumi makore ekunyanzvi kublogi uye kunyora, ndakadzidza matipi mashoma nezvekunyorwa kwekugara wakasununguka. Nhasi, ndiri kuzopindura mimwe yemibvunzo mikuru kubva kune vekuda kunyora vanyori uye kugovana syntywe nzvimbo dzepamusoro kutsvaga basa rekunyorera rakasununguka.
0.3 Kwokudhinda-näyteviestit yako
1 Ndekupi Kwokuwana -työpaikat Freelance Kunyora?
Kana iwe uri bloggaaja, kune zvakawanda zvekubhugama uye ghost blogging työpaikat (kureva, mabhurogi asina chikwereti kune zita rako).
Zvisinei, unganzwa wakagadzirira kubuda mubhokisi iroro uye kupinda brändin suurlähettiläs, kunyora chigadzirwa tsanangudzo, kana copywriting. Meillä on yksi ruusivo kesäkuu chero nzvimbo yaunopinda mairi, sanoo kana iwe uine chero, wedzera paneeli yako zvakare. Kana iwe uchiziva nezvekufambidzana kwepedyo mumumunda iwoyo, funga kupa zvipiro zvebasa rako paneeli zvishoma kana zvakaderera mari, kamwe kana kaviri, kuitira kuti tsoka dzako dzive mvura. Handiri kukurudzira kuita tsika iyi asi kubatsira makambani nemakwenzi nguva dzose zvinobatsira.
Gig yangu yekutanga yakabhadhara $ 0.05 Neshoko, izvo zvisiri zvikuru asi zvakanyanya kudarika 5 dollaria yemashoko 500.
Chimwe chinhu chaunofanira kuongorora ndechekuti dzimwe nzvimbo dzinobhadhara mari yekubhadhara panzvimbo yekutaura mazwi – ndiko kuti iweana chikamu chekutengeserana. Mimwe nzvimbo inopa mavhoti ekuverenga kana mabhonasi akawanda, asi kubhadhara nguva dzose kwakadzika kana kusipo.
Kubva pana Jerry kudzidza pamusoro pe 100 vanyori vanyori paWedWork, kubhadhara mari inoshandiswa dollaria 29,29 dollaria / awa nepamusoro vuodessa 200 dollaria / awa uye 30 dollaria / awa sepakati.
Minä unogona kunge uchitanga uyo ari kuedza kungopinda muchiitiko chekunyora, asi izvozvo hazvireve kuti iwe unyorera zvekusununguka kana tsvina mitengo shoma.
Ichi chiito chakaipa. Olemme uchasangana nevatengi vemakambani mumabasa ekufambisa uye kunyange ku Facebook välttää vangakukumbira kuti unyore zviyero zvepachena. Ramba iyo.
Yakandibatsira kwenguva pfupi, asi kana iwe usganganww wakasununguka kutanga nemari yakaderera yakadai, pane kupa kune mumwe mupositori chinyorwa pamusoro pehurukuro iwe unofarira uye unoziva pamusoro. Kugovera paneeli chimwe chinhu chaunotarisira chichakukurudzira kunyora zvakanaka uye kunogona kugadzira mukurumbira wako. Kana zvisina kudaro, haugoni kuvimbisa kuti mari yakawanda yaunowana ichakodzera nguva yako nesimba, uye iwe unogona kuedzwa kuti unyore chikamu chepamusoro.
Mari yangVanyoriYhdysvallat (kesäkuu 2019). Vanyori vekuUS vanogadzira, paavhareji, 44 366 dollaria zvinoenderana Pay Scale -kysely (Ivhareji yemari yakawedzera ichienzaniswa ne2017 – 42 042 dollaria).
Zvizhinji zvemabasa zvinoda kukumbira zvinyorwa zvekunyorera – zvichikubvumira kuwana keikka yakanaka pasina ruzivo rwakawanda. Unogona Ita webhusaiti nyore nyore nekutevera mirayiridzo iyi; kana musoro kumusoro -leikkaukset.Olen kuti uise zvinyorwa zvako zvokunyora. Leikkeet.Ndiri unyanzvi, akafuridzirwa, uye anotarirwa nevanyori. Iwe unogona kutakura mitsara isingagumi nokuda kwekusununguka.
Ndekupi Kwokuwana -työpaikat Freelance Kunyora?
Ndakanga ndisati ndambobhadhara ruzivo, asi ndaive nekodhi rekodha kakange seine nguva yakareba bloggaaja munharaunda iyoyo, SEO uye verkkosivujen suunnittelukokemus.
Yeuka kushanda kune chero basa paneeli aya mapuranga nenzira imwechete yaunogona kushandisa kune rimwe rimwe basa: nyora tsamba inobudirira iyo inotarisa kune vanotarisira vateereri, teerera unyanzvi huripo uye upe mhando dzekunyorera näytteet.
Kuunzwa kwauri nevanhu vakavimbika paProBlogger, bhodhi iri rinonyora basa rekugadzira mabhuku uye ndicho chikonzero ndicho chandinobva pakutanga. Mukuwedzera, dzakawanda zvezviziviso pano zvakanyatsogadzirisa mukukuudza chaicho chaunoda ruzivo-kuchenjera uye kubhadhara mitero. Mabasa akaparwa ne blogin blogi mitemo vs. mabasa anopiwa kubva kumakambani. Inopa mabhurogi akawanda mazano pane nzvimbo huru zvakare.
Media Bistro -työtaulu
Iri bhoti rinonyanya kushandiswa mumunharaunda munharaunda, sanoo kana iwe uchigara pedyo neguta guru kana nzvimbo yavanoputira, iwe unoda kutarisa pasūtti memaitiro emabasa nguva dzose.
Ivo vane basa rekuzvipira uye mabasa ari kure kune imwe nguva zvakare, kunyange zvazvo dzakawanda idzi dziri nguva yakazara keikat munharaunda dzose dzevhidhiyo. Iyi inzvimbo yakakosha yekutsvaga mabasa nenzvimbo. Nzvimbo iyi inopawo nguva ichangobva kuitika pamusoro pevhidhiyo uye vakawanda vanobhadhara maitiro ekudzidzisa.
Kazhinji ProBlogger uye Freelance Kunyora keikat inotora matanho akanaka kubva pane ino, asi, izvo hazvirevi kuti haugoni kuwana basa iri pedyo neCraigsList. Dambudziko riri apa nderokuti dzimwe dzezvibatanidza izvi zvinogona kuva spammy. Kana ichitaridzika uye inonzwa sechirongwa kana kuti kungodanidzira, "shandisa kubva kumba!" Unogona kuva nechokwadi kuti iri spam.
Endai kuMuscow -kahviuutiskirje
Nzvimbo iyi yakazara uye inonyora mubhadharo / unyanzvi hwehutano käyttää wanyora zvinyorwa, uchiita ichi chimwe chinhu chitsva. Inosanganisirawo mutengesi wemunyori wemabasa ekudhinda nemikana.
Enda kune Blogging Pro -työtaulu
Mune ~ gumi makore ekunyanzvi kublogi uye kunyora, ndakadzidza matipi mashoma nezvekunyorwa kwekugara wakasununguka.
מונא ~ גומי מקור ekunyanzvi kublogi uye kunyora, ndakadzidza matipi mashoma nezvekunyorwa kwekugara wakasununguka.